Dib u habeynta Cimilada ee Webinar! - Xarunta EcoTechnology
Oktoobar 18-keedii, waxa aanu qabanay webinar-ka Shaqooyinka Cimilada. Haddii aad seegtay webinar-ka, ama aad rabto inaad dib u booqato mawduuc aanu ka hadalnay, eeg duubista hoose!
Cimilada gurigaaga waa hagaajin sahlan oo si weyn u kordhin karta raaxadaada iyadoo hoos u dhigaysa qiimaha nolosha.
Waxyaabaha diiradda lagu saarayo webinar-ka waxa ka mid ahaa hufnaanta tamarta guriga, barnaamijyada cimilada ee la heli karo, iyo talooyinka cimilada-Is-Adiga-Naftaada ah (DIY).
Marka la eego hufnaanta tamarta guriga, waxaanu ka wada hadalnay xaqiiqda ah in qiimaynta tamarta gurigu u tahay bilaash qof kasta oo bixiya biilasha tamarta ee Massachusetts. Tani hubaal waa kheyraad laga faa'iidaysan karo! HEA waxa lagu keenaa Mass Save, shirkadda korontada ee degmadaada, ama urur wax qabad oo beesha ah, haddii aad dakhli u banaan tahay. HEA waxay ku qasbi doontaa booqasho toos ah ama qof ahaan ah oo ka yimi khabiir tamareed. Iyadoo adeegyada degmada laga yaabo inay bixiyaan waxyaabo kala duwan, Mass Save HEA waxaa ka mid ah kormeerka guriga, warbixinta tamarta, 0% amaahda kulaylka dulsaarka, cabbirada kaydinta degdega ah, dib u celinta qalabka, tijaabinta badbaadada gubashada, dahaarka qiimaha jaban, iyo xidhidhiyaha hawada bilaashka ah. Tallaabooyinka kaydinta degdegga ah waxaa ku jiri kara waxyaabo ay ka mid yihiin heerkulbeegyada la baran karo iyo hawo-qaadayaasha tuubada.
Marka la eego barnaamijyada cimilada ee la heli karo, kheyraadka ugu fiican waa Mass Save. Waxaad ka wici kartaa 1-866-527-7283 ama u tag kooda website. Waxaad sidoo kale aadi kartaa Tamar ku Keydi Bogga Guriga ku yaal bogga Xarunta EcoTechnology. Maskaxda ku hay in Adeegga Kahortagga Luminta Tamarta Guriga (HELPS) waxay qusaysaa dadka ku nool magaalooyinka leh adeegyada degmada. Barnaamijyada tamarta waxqabadka beesha waxay sidoo kale bixiyaan gargaar cimilada iyadoo loo eegayo dakhliga.
Sayniska aasaasiga ah ee dhismaha ayaa muhiim ah in lagu tixgeliyo macnaha cimilada. Inta badan, Saamaynta Stack waa ciyaar. Saamaynta Stack waxay ka kooban tahay qabow, cufan, hawo bannaanka ah oo guriga ku soo gelaysa iyada oo la dhexgelinayo, iyada oo diirran, hawo firfircooni ka baxdo iyada oo loo marayo saqafka, saqafka. Saameyntu waxay kordhisaa marka heerkulku hoos u dhaco. Fahamka Saamaynta Iskoorka waxay naga caawinaysaa markeeda inaan fahanno sababta cimiladu muhiim u tahay.
Xididan, waxaan markaas daboolnay talooyinka Do-It-Yourself ee ku saabsan cimilada gurigaaga.
Xusuusnow: xidhitaanka hawadu waa talaabada ugu horeysa ee cimilada guri kasta. Habka xiritaanka hawadu waxay ku lug leedahay in la aqoonsado baro ku yaal guriga halkaas oo ay ka soo baxayso hawadu, ka dibna la qaado tallaabo lagaga hortagayo daadinta hawada. Intaa ka dib, waxaad bilaabi kartaa inaad dahaadhayso gurigaaga. Dahaarku wuxuu yareeyaa lumitaanka tamarta kulaylka iyada oo loo marayo agabka.
Isbeddellada gaarka ah sida rakibidda xaaqida albaabka, gaasaska xumbo, iyo V-seal, iyadoo la isticmaalayo caulk, xumbo buufinta, iyo dahaarka tuubada xumbo, ayaa sidoo kale samayn kara farqi.
Waxaan rajaynaynaa inaad heshay xog-waraysi iyo waxtar leh webinaarkayada cimilada Xusuusnow, cimiladu waa difaaca ugu fiican ee gurigu ka yeelan karo waxtar la'aanta!
Shaqooyinka Cimilada Dayrta 2021 Webinar ka Xarunta EcoTechnology on vimeo